Burundi oo ciidankeeda kala baxaysa Soomaaliya - BBC Somali
Image caption Burundi ayaa ah dalka labaad ee ciidammada ugu badan ku biiriyay AMISOM, waxaana Soomaaliya kaga sugan 5,400 oo askari.
Madaxtooyada Burundi ayaa si rasmi ah uga codsatay wasaaradaheeda difaaca iyo arrimaha dibedda, in ay billaabaan hannaanka ay ciidanka dalkaasi uga baxayaan AMISOM, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP.Burundi ayaa ah dalka labaad ee ciidammada ugu badan ku biiriyay AMISOM, waxaana Soomaaliya kaga sugan 5,400 oo askari kuwaasoo kharashaadkooda ka heli jiray Midowga Yurub.
Go'aanka ay Burundi kula baxayso ciidankeeda ayaa ka dhashay markii uu Midowga Yurub joojiyay mushaarka uu dowladda dalkaasi u mariyo ciidankeeda AMISOM ka tirsan.
Lacagtaasi ayaa dhan 5 milyan oo Euros bishiiba.
Doorashadii madaxtinnimo ee Burundi ka dhacday April 2015, taasoo si dastuurka khilaafsan uu ku guuleystay Pierre Nkurunziza, ayaa waxa ay dhalisay in dalkaasi ay cunaqabateyn saaraan ururo caalami ah oo uu ka mid yahay Midowga Yurub.
Mas'uul sare oo ka tirsan dowladda Burundi, Gaston Sindimwo, ayaa u sheegay AFP:
"Waxaan go'aansanay in aan bilowno hannaanka la bixitaanka ciidankeeda, arrintaasi oo aan mar hore shaacinay, maadaama aanay askarteena kasii mid ahaan karin AMISOM ayaga oo aan wax mushaar ah qaadan."
Bishii November ee lasoo dhaafay, Midowga Afrika ayaa ku gacan sayray go'aanka uu Midowga Yurub ku joojiyay lacagta mushaarka ah ee ciidanka Burundi uu u mariyo dowladooda, waxaana uu ka digay in tallaabadaasi ay cawaaqib xun ku reebi karto AMISOM.